Iingubo ezide zibafazi abacebileyo
Kukho okungaqhelekanga okungaqhelekanga ukuba abafazi beefom ezintle bakuthola kunzima ukufumana iimpahla ezifanelekileyo, ukwenzela ukuba ihambelane nemigangatho yefashini kwaye ibonakale ikhangelekile. Ngoko ke, ngokuphindaphindiweyo uhambo lokuthenga ukuthenga into ephelile ngokuthengwa kwengubo egciniweyo yokugqoka umbala omnyama okanye enye inkcazo yengubo yokugcoba, iinqununu ezingalunganga. Umsebenzi wethu kukuhlaziya inkolelo yokuba akukho miyezo emihle yokugqoka imantombazana epheleleyo kwaye ibonisa ukuba unokukhangeka ukhangeleka ngamapounds.
Iingubo ezinde zokufumana amantombazana agcwele
Izambatho ezide okanye iingubo eziphantsi emgangathweni zinikezelwa kakhulu kumantombazana apheleleyo. Ezi sigqoko zifihla ngokugqibeleleyo iimpazamo zala manani kwaye zigxininise ubuhle. Izitayela ezona ziyimpumelelo zengubo ezinde zokugqoka iingubo ezipheleleyo zihlobo olusenyongweni. Ukunqunyulwa kwamahhala kwengubo kuya kunceda ukugqithisa isibalo kunye nokugubungela ukungalingani kwesikhumba, kodwa phezulu, ngokuchaseneyo, kuya kunika ithuba lokubonisa indawo enhle ye-decollete.
Izambatho ezide kubafazi abagciniweyo abanokungabi nje ngobusuku kuphela, kodwa nokuba yinto ekhethekileyo yokugqoka idayardi yansuku zonke. Ukukhethwa kweengubo kwiofisi kungcono ukuyeka ukudibanisa i-laconic ye-monophonic phezulu kunye ne-checkered bottom, kwakhona, ngesinqe esiphezulu. Ikhowudi yokugqoka ye-Office ibonisa imida eqinile, ngoko ukhethe ingubo ngezantsi phantsi kwengubo yepencil okanye isalathisi esinezintlu.
Ukuhamba okanye ukuphumla, amantombazana apheleleyo akudingeki ukuba agqoke ibhulukhwe yezemidlalo kunye ne-t-shirts. I-Bright, floral sarafans, iingubo zokukhanya kunye ne-neckline evulekile yile mizekelo enokuyithandabuza ngokuqinisekileyo, xa sele ivivinywe. Izambatho ezininzi zokuzihlawula iimpahla ezinamantombazana apheleleyo zidibaniswe ngokugqithiseleyo neengubo ezimfutshane, ijeyiti okanye i-cardigan.
Iimodeli zeengubo ezinde zokufumana amantombazana apheleleyo zikhethiweyo zivela kwijezi ebanzi okanye i-chiffon. Ukuhlanganiswa kweempahla ezininzi kuyamkeleka, umzekelo, umphezulu wenziwe nge-satin, kunye ne-hem yenziwe nge-chiffon eninzi ekhethiweyo. Izindwangu ezihambayo zifihla ngokupheleleyo iinqumle ezipheleleyo kwaye zibonise i-silhouette.
Kunenzuzo ukufihla amamitha angaphezu kweesentimitha endaweni yesinqe ngebhanti ebanzi kwiingubo ezide ezipheleleyo. Le ncedisi yenza imisebenzi emininzi ngokukhawuleza - ihlobisa, ifihla, igxininisa. Ngokukhawuleza uyayixabisa lo mzekelo wokugqoka, kuba akukho nto ibhinqa ngaphezu kwesifuba esicacisiweyo kunye nommandla wokugqithisa kwiimodeli ezininzi zokugqoka.
Sebenzisa iingcebiso zethu kwiindawo zokugqoka iimpahla ezimnandi zokugqoka iimantombazana ezipheleleyo kwaye ukhethe iimpahla ezifanelekileyo.
I-Cashmere Short Coat yabafazi
Iimbambo ze-Nike kwi-wedge
Ukugqoka i-Coral kwi-prom
Izikhwama zesikolo zabaselula
Isikiti saseTulip esipheleleyo
Iingubo zentshatsheli zabafazi abakhulelweyo
Isihlangu se-lace-up nge-5 imigodi
Iingqayi i-North Face
I-Lasagna enezilwanyana zaselwandle - iresiphi
Ziza nini na ukubeleka emsebenzini?
Intloko ethempelini nasamehlo
22 abatsha abaye bafakazela ukuba ukuba ufuna ukuba ungalala naphi na
Iingcamango zokuphuhlisa ubuntu
Vietnam - ezikhenketho
I-Cupcake neerinki-iresiphi yeklasi
Intaba yase-Annan Botanical Garden
Kutheni u-Aleksei Makarov enesisindo?
Iingcamango ezingama-49 zekhaya apho kukho abantwana
Ingcango yangaphakathi kunye nesibuko
Izigqoko zephepha ezityekisayo ezifunekayo wonke umntu
Visa ukuya eLithuania ngokwakho
Iisokisi eziphakamileyo zowesifazane
Ukudibaniswa kwe-coccyx - iimpawu kunye nemiphumo